realme dia manolotra ny fanolorantenany amin'ny smartwatches miaraka amin'ny realme Watch | Androidsis
Ny orinasa Aziatika Realme, orinasa iray izay nampifantoka ny tsenany amin'i India, dia nanolotra ny fanolorany tamin'ny fomba ofisialy ny tsenan'ny smartwatch miaraka amin'ny Realme Watch, tsena iray izay Toa nilaozan'ny Google tato ho ato, na dia taorian'ny fifanarahana tamin'ny fividianana patanty avy amin'ny Fossil, azo inoana fa hanome antsika fahagagana izany amin'ny volana ho avy.
Ny realme Watch vaovao dia manome endrika amboarina ho antsika, mitovy amin'ny Apple Watch (Tsy io irery no fifanandrifian-tsaina amin'ny smartwach be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao), manana efijery LCD, tahan'ny fo ary metatra oksizena amin'ny rà, fanoherana rano ary fizakantena lehibe miovaova arakaraka ny fiasa ampiasaintsika.
Mahaliana ny manantitrantitra ny mpamokatra sasany amin'ny fivarotana ny vokatra arakaraka ny fampiasantsika, izany hoe, raha nampavitrika ny asa rehetra isika, raha toa ka fetraintsika ny sasany na raha ampiasaintsika fotsiny hanehoana ny ora sy ny zavatra hafa. Ny mpampiasa izay mividy smartwatch dia mividy azy io potsero tsara, izany hoe, hanararaotana ireo fiasa rehetra atolotray antsika, satria raha tsy izany dia mividy bracelet miisa.
Famariparitana Realme Watch
Ny realme Watch dia afaka mandeha ho azy mamantatra ny karazana hetsika ara-panatanjahantena manao karazany 14 isika, ao anatin'izany ny basikety, baolina kitra, tenisy ambony latabatra (Ping Pong), bisikileta, fihodinana, elliptika, yoga, cricket, hazakazaka, tongotra, treadmill, badminton, aerobics ary fitness.
Mamela antsika mandray fampandrenesana amin'ireo fampiharana mahazatra toy ny WhatsApp, Instagram, Twitter, Gmail, Instagram, Messenger ... ankoatry ny antso fa tsy mamela antsika hamaly azy ireo mivantana avy eo amin'ny tanantsika. Io dia ahafahantsika mifehy ny fakantsary misy ny fitaovantsika, mitantana ny filalaovana mozika amin'ny finday avo lenta.
Raha ny momba ny safidy namboarina dia manolotra anay ny realme Watch 12 karazana spheres isan-karazany (bebe kokoa no hampidirina amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy) sy ny fehy, kofehy misy karazany roa: Klasika (miaraka amina fomban-drazana nentim-paharazana) sy ny lamaody (izay ny rafitra fanidiana dia mitovy amin'ny hita ao amin'ny fantsom-panatanjahantena Apple Watch).
Ny smartwatch realme voalohany tsy tantanan'ny Android, fa amin'ny rafitra fiasa miasa anao, mety mitovy amin'ilay hitantsika ao amin'ny Realme Band. Ho hita any India izy io amin'ny 5 Jona ho an'ny 3999 Rupee, latsaky ny 50 euro hanovana. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny daty hampiasana an'ity smartwatch vaovao ity any amin'ny firenen-kafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » realme dia manolotra ny fanolorantenany amin'ny smartwatches miaraka amin'ny realme Watch
Tsy dia ratsy mihintsy io, omenao lalana ve?
Valiny tamin'i Jorge Pérez
Ny fampiharana Google tsara indrindra ho an'ny Android
Izao dia misy Citra, emulator vaovao tsara ho an'ny Nintendo 3DS